MBA Preview Seminar – Innovation | Myanmar Youth Empowerment Opportunities
MBA Preview Seminar – Innovation
Posted on November 23, 2017 by MYEO in Local //0Comments
Deadline : 24 November,2017
Location : Strategy First Institute – U Wisara Campus – အမှတ် (၂၃၇)၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
Duration : Saturday at3PM –5PM (25 November,2017)
Description : MBA Preview Seminar on Innovation ကို Dr. Arthur Gogatz ဟောပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။Dr. Arthur Gogatz သည် Stamford International University မှ Associate Professor တစ်ဦးဖြစ်ပြီး World Innovation Team ၏ Director တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါသည်။ Stamford Signature-MBA တက်ရောက်ရန် ရည်းရွယ်ထားသူများ တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ Seminar အပြီးတွင် Stamford International University မှ MBA Program အကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
To Register : တက်ရောက်လိုသူများ အနေနဲ့ ၀၉-၄၅၀၁၇၇၇၇၀ သို့ ဆက်သွယ် စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
Description : MBA Preview Seminar on Innovation ကို Dr. Arthur Gogatz ဟောပွောသှားမှာဖွဈပါတယျ။Dr. Arthur Gogatz သညျ Stamford International University မှ Associate Professor တဈဦးဖွဈပွီး World Innovation Team ၏ Director တဈဦးလညျးဖွဈပါသညျ။ Stamford Signature-MBA တကျရောကျရနျ ရညျးရှယျထားသူမြား တကျရောကျနိုငျပါသညျ။ Seminar အပွီးတှငျ Stamford International University မှ MBA Program အကွောငျးကို ရှငျးလငျးပွောကွားပေးသှားမညျဖွဈသညျ။
To Register : တကျရောကျလိုသူမြား အနနေဲ့ ၀၉-၄၅၀၁၇၇၇၇၀ သို့ ဆကျသှယျ စာရငျးပေးသှငျးနိုငျပါသညျ။
For more information,You can visit their facebook page.